About isu - Foshan Tongyida paakasimudza Equipment Co., Ltd
FOYO cheni misa
PA Mini Electric chitakuriso
Foshan Tongyida paakasimudza Equipment Manufacturing Co., Ltd specialized pamasikiro, gadzira uye kugoverwa vachisimudza uye hoisting michina.
Pashure anenge 5 makore kukura, nhasi tiri mumwe vaitungamirira makambani mumunda yedu, tine 100 tsvimbo nokuti nyanzvi akura kugadzira chikwata, unhu kudzora chikwata, kugadzirwa kwounyanzvi chikwata uye chikwata okutengesa basa.
Tongyida paakasimudza Equipment Group anogona kupa zvose zvenyu Chinyorwa michina kusimuka uye zvinhu mukugadzirisa zvinodiwa pa zvikuru sezvo makwikwi mitengo. With International ISO Approvals nokuda kwayo unhu mugadziriro uye CE, gs, TUV advertising, boka redu vanozvikudza kugamuchira iwe kushanyira fekitari yedu uye kutarisira kunzwa kubva kwamuri.
We vanoomerera nheyo "Unhu rokutanga, basa rokutanga, chinoenderera kuvandudzika uye utsanzi kunochingura vatengi" uye "razero rakaremara, razero zvichemo" sezvo unhu chinangwa.
More Nakidzwa Cantonfair yako
2017 vanopinda Middle East Hardware Exhi ...
Teererai Canton Fair nguva dzose dzose gore